20 caado oo kaa dhigi doonta naqshadeeye guuleysta | Abuurista khadka tooska ah
20 caado oo kaa dhigi doonta naqshadeeye guuleysta
Waxaa jira sababo badan oo ah sababta naqshadeeyayaasha ama qof kale qofka ayaa shaqadiisa ku guuleysta. Sababahaani guud ahaan waxay la xiriiraan adiga waxqabad iyo caadooyin taxane ah oo dadka noocaas ah ay barteen noloshooda oo dhan kuwaas oo ka caawiya iyaga inay cabiraan waxqabadkooda iyo qorshaynta sida loo horumariyo.
In kasta oo aysan jirin cunto karinta guusha, waxaa jira dhowr waxyaabaha aan sameyn karno si aan kor ugu qaadno waxqabadkeena Waa kuwan qaar ka mid ah sidaa darteed waad ku korsan kartaa nidaamkaaga caadiga ah.
1 Noqo qof dareen leh
2 Ku dhaliil shaqadaada
3 Weydii inay cambaareeyaan shaqadaada
4 Ha u oggolaan inay kaa dhigaan waqtiyo dhalmo aan macquul ahayn
5 Raadi waxyoon wax walba
6 Baro inaad fogeyso naftaada si aad dib ugula soo noqoto dardar dheeraad ah
7 Soo ogow waxa aad sida ugu fiican u qabato
8 Dhageyso oo daawo
9 Ku celcelin, ku dhaqan oo ku dhaqan
10 Kor u qaad awoodaada mudnaanta
11 La soco isbeddellada
12 Ka gudub wixii aad sameyn lahayd
13 Baro inaad ku shaqeyso cadaadis
14 Samee awooda badan
15 Hayso nidaam urureed oo wanaagsan
17 Ogow warshadahaaga
18 Noqo maamul
19 Lasoco macaamiishaada
20 Markaad kacdid, wiishka hoos u soo dir
Noqo qof dareen leh
Inta ugu badan muhiim u ah xirfadlaha naqshadeeyaha waa hammuun. Tani waa warshad adag oo garaacis ah oo u baahan xiiso joogto ah iyo dadaal. Naqshadeeye si dhib yar ayuu u kori karaa oo u noqon karaa kan ugu fiican haddii aan la jeclaysan oo uusan ka helin waxqabadkiisa wax soo jiidasho leh
Ku dhaliil shaqadaada
Waa lagama maarmaan naqshadayaasha inay lahaadaan awoodda is-qiimaynta joogtada ah iyo dhaleecaynta. Kuma filna inaad ku faraxsanaato mashruuca, waxaa lagama maarmaan ah inaad dalbato oo had iyo jeer aad u maleyso inaad wax ka sii fiicnaan laheyd. Muddada dheer tan shardi noqon doonaa heer sare.
Weydii inay cambaareeyaan shaqadaada
Laba indhood oo indhuhu waa ka fiican yihiin mid qudha, taasi waa sababta had iyo jeer raadso fikradaha dadka kale. Isku day inaad xulato oo aadan ku dhicin ciyaar dhadhan, tan waxaad u dooneysaa dhaleeceynta dadka aad u bogi Ujeeddadiisuna tahay in la falanqeeyo sababta qofkani sidan ugu fekerayo.
Ha u oggolaan inay kaa dhigaan waqtiyo dhalmo aan macquul ahayn
Weydii waa maxay taariikhda rasmiga ah ee mashruuc la keenayo. Ha u oggolaan dadka kale inay go'aamiyaan liiskaaga mudnaanta iyaga oo ka been sheegaya waqtiga kama dambaysta ah. Weydii macaamiishaada jadwal mashruuc ah oo kaa caawinaya inaad fahamto sababta ay u doorteen taariikhdan. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay waqtiyada kama dambaysta ah ee mashruuc kasta. Kuwaas muhiim u yihiin wax soo saarka, Maaddaama ay naga caawinayaan inaan si hufan uga shaqeyno mashruuc diiradda saaraya dhammaan dareenkeenna ka dibna aan ku sii wadno mid kale.
Raadi waxyoon wax walba
Adduunku waa dhiirrigelin abuurana adduunka ayuu nuugaa oo dib loo tarjumayo. Tani waa waxa sameeya naqshadeeye guuleysta. Waad ogtahay sida loo qaato xoqyada walxaha oo dib loogu celiyo wax isu rogaya wax qabad iyo / ama hal abuur leh soo jiidasho leh.
Baro inaad fogeyso naftaada si aad dib ugula soo noqoto dardar dheeraad ah
Waa qalad in laga fikiro in aan u baahanahay 100% waqtigeena in aan u shaqeyno si aan u guuleysano. Marka la eego culeyska waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado goorta daqiiqad la qaadanaayo, iska tag oo nadiifi. Xaaladahaas oo kale, waxaa habboon in jimicsi la sameeyo, la lugeeyo ama la qaato fasalo qoob-ka-ciyaar tusaale ahaan.
Soo ogow waxa aad sida ugu fiican u qabato
Si kale haddii loo dhigo soo hel niche-kaaga oo aad halkaas ugu horumariso xoog weyn. Markaad ku guuleysato inaad dhex gasho suuqa oo aad ku dhisto hawl gaar ah, waxaad la wareegi kartaa caqabado cusub. Laakiin marka hore maskaxda ku hay ma aha tirada laakiin waa tayada.
Dhageyso oo daawo
Waa inaad horumarisaa xirfadaha dhageysiga. Kuwani waa lagama maarmaan in la barto sida macaamilku u fikiro laakiin waxa ka sarreeya waxay kaa caawineysaa inaad u damqato adeegsadaha alaabtaada iyo inaad fahanto sababta ay lagama maarmaanka u tahay in badeecaddu u yeelato astaamo caynkaas ah ama sida oo kale ah.
Ku celcelin, ku dhaqan oo ku dhaqan
Tani waa mid ka mid ah awoodaha ugu muhiimsan ee naqshadeeyaha. Dariiqa kaliya ee aan ugu fiicnaaneyno wax uun waa iyada oo la adeegsado tababar joogto ah oo noo horseeda inaan baranno waxa ay yihiin siyaabo wax ku ool ah oo waxqabad loo sameeyo.
Kor u qaad awoodaada mudnaanta
Fahmaan cidda ama waxa u baahan dareenkaaga dhammaystiran ama kuugu dhow. Keliya mudnaanta ayaa aad awoodi doontaa inaad la kulanto waqtiyada foosha adag ee habka ugu wax ku oolsan oo markaa aad awoodi karto inaad bixiso a adeeg shaqsi ah.
La soco isbeddellada
Naqshadeynta ayaa ah warshadaha go'aamiyay isbeddellada Taasina waa sababta aan marwalba uga warqabno isbeddellada saameynaya suuqyada kala duwan ee aan u shaqeyno. Tani waxay go'aamin doontaa caan iyo aqbalaad in badeecadeenu ku yeelan doonto bulshada guud.
Ka gudub wixii aad sameyn lahayd
Tani waa mid aad u fudud haddii ay weydiistaan ​​100% waxaad siinaysaa 200%. Sidaas waxaad tusi doontaa macmiilka dadaalkaaga mashruuca oo waxaad fursad fiican u heli doontaa isaga inuu doorto inuu kula shaqeeyo mar kale. Dhinaca kale, waxay sidoo kale kaa caawin doontaa in lagugu jeclaado sida ugu wanaagsan ee aad u fuliso hawshaada.
Baro inaad ku shaqeyso cadaadis
Tani waa warshad ujeeddadeedu tahay. Sababtaas awgeed, mashaariicda badankood waxay u baahan doonaan door firfircoon dhinaca naqshadeeyaha. Waa lagama maarmaan in gaarsiinta la fuliyo taariikhaha la aasaasay maaddaama shaqadeennu ay tahay xiriiriye saameyn ku yeelan doona silsiladda wax soo saarka oo dhan oo dhaawici kara macaamilka.
Samee awooda badan
Haddii aad u maleyneyso inaad ku guuleysan karto horumarinta mashruuc isla waqtigaas, aad baad u qaldan tahay. Naqshadeeyayaasha ka shaqeeya hay'adaha waaweyn guud ahaan waxay leeyihiin 5-10 mashruuc oo muhiimaddo kaladuwan loo xilsaaray iyaga kaligood. Haddii aad rabto inaad gasho horyaalada waa weyn inaad gasho waxay leeyihiin awood ay ku maareeyaan baahiyaha macaamiil badan, dhakhso.
Hayso nidaam urureed oo wanaagsan
Inaad awood u yeelatid inaad si madax-bannaan u shaqeyso oo aad u hoggaamin karto dhowr mashruuc oo isku mar ah waa ahaanshaha maamule naqshad weyn waa lagama maarmaan. Taasi waa sababta ay lagama maarmaanka u tahay in si cad loo caddeeyo qorshaynta iyo jadwalka dhammaan mashaariicda si loogu fuliyo howlaha taariikhaha la dejiyey. Tan waxaad u isticmaali kartaa qalab sida Trello o Wunderlist.
Aad ayey muhiim ugu tahay naqshadeeyaha inuu yeesho awood uu ku hawl galo xiriirka kala dhexeeya dadka ka kala socda hawlo kala duwan iyo warshado. Had iyo jeer xasuusnow inaad sidato kaarkaaga shaqsiyeed meelkasta oo aad daneyneyso inaad sameysid liis xiriir oo ay kujiraan ganacsato, farshaxanno, macalimiin iyo asxaab.
Qofna ma aha inuu ka aqoon badan yahay meheraddaada. Aqoonta ayaa ku siin doonta faa'iidooyin tartan ah oo aad kaga badiso asxaabtaada kale. Taasi waa sababta ay tahay inaad isku daydo inaad waxbadan ka ogaato waxkastoo la xiriira waxqabadkaaga. Koorso aad sameyn karto, waad sameyn kartaa; bandhig faneed waad tagi kartaa, waad tagaysaa; buug soo baxa, adigaa akhriyaya; barnaamijka naqshadeynta ee muuqda, waxaad baranaysaa sida loo isticmaalo.
Dadku waxay raadinayaan qof ay raacaan, ee noqo mid. Ma jiro wax ka qancin kara naqshadeeye oo aan ka ogaan karin waxa ay tahay qof dhiirigelin u ah dadka kale.
Kuma filna in mashruuc kaliya la qabto, laakiin sidoo kale a dabagal dambe si loo qiimeeyo natiijooyinka in mashruucu ku lahaa ururka. Kadib, tan tan, horumarinada mustaqbalka waa la odorosi karaa oo go'aamin karaa waxa ay ahaayeen qaladaad sameeyey inaadan markale ku celin.
Markaad kacdid, wiishka hoos u soo dir
Laakiin wixii ka sarreeya waxa aad sameyneyso, mar haddii aad ku guuleysatay inaad noqoto naqshadeeye guuleysta hubi inaad caawiso sida ay iyagu kuu caawiyeen. Waa cadaalad in loo ogolaado dadka kale inay haystaan ​​fursado uu qofku haysto oo uusan waligii ilaawin inuu meeshaas ku jiray una baahan yahay gacan. Waxaan sii wadi karnaa koritaanka kaliya haddii aan leenahay mahadnaq iyo midnimo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 20 caado oo kaa dhigi doonta naqshadeeye guuleysta
Wax ka qabashada sawir qaadista iyo 10-ka fanaaniin ee ugu dhiirigelinta badan